အလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ရမယ့် Myanmar Snacksလုပ်နည်း(14)မျိုး | The Restaurant Guides for Myanmar
အလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ရမယ့် Myanmar Snacks လုပ်နည်း(၁၂)မျိုး
(ဆီးချိုရှိသူများ နှင့် အချိုရှောင်လိုသူများပါ စားလို့ရမယ့် စမိုင်ကို အိမ်မှာ လွယ်လွယ် နဲ့ မြန်မြန် လုပ်စားကြမယ်)
မိသားစု ၅ယောက် အတွက် စမိုင်ခြောက်(လှော်ပြီး) ၅ကျပ်သား
အဆီထုတ်ထားသော (non fat) နွားနို့ကြိုပြီးသား ၁လီတာ
Dawn နို့စိမ်း ဟင်းချက်ဇွန်းကြီး ၂ဇွန်း
Equal သကြားတု ၁၀ထုပ်
စပျစ်သီးခြောက် (ကြိုက်လျှင်) အနည်းငယ်
အိုးကို မီးပူပေးပါ။ အိုးပူလာပြီဆို ထောပတ်ကို အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက် စမိုင်ခြောက်ကို ထည့်၍ မီးအေးအေးဖြင့် နှံအောင် မွှေပေးပါ။
ထောပတ် အားလုံး စိမ့်ဝင်သွားပြီ ဆိုပါက နွားနို့၊ နို့စိမ်း၊ Equal သကြားထုပ်၊ ဆား ထည့်၍ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် တောက်လျှောက်မွှေပေးပါ ။
ပျစ်လာပြီဆိုတိုင်း ရေနွေး ထပ်ရောမွှေပေးပါ။ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့် သေချာ မွှေပြီးပြီဆိုပါက စမိုင် နူးပါပြီ။
ထို့နောက်မှ စပျစ်သီးခြောက်လေးထည့်မွှေ၍ အအေးခံပြီး အရသာရှိရှိ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ အိမ်လုပ် ရိုးသားတဲ့ စမိုင်လေး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဒူးရင်းသီး၊ နွားနို့၊ ဆား၊သကြား၊ နို့ဆီ၊ နို့စိမ်း တို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ပထမဦးဆုံး ဒူးရင်းသီးကို အခွံနွှာပြီး အသားကို နွှင်ထားပါ၊ ပြီးလျှင် နွားနို့ကို မလိုင်ဖတ်ကလေးတက်လာသည်အထိ ကျိုပေးထားပါ၊ ပြီးလျှင် မလိုင်ဖတ်ကလေးတွေကို ဇွန်းဖြင့် ဆယ်ယူပြီး ဖန်ခွက်တစ်လုံးထဲ ထည့်ပေးထားပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် မလိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ ကျိုနေတဲ့ နွားနို့ထဲသို့ ဆား၊ သကြား၊ နို့ဆီ၊ နို့စိမ်းတို့ကို ထည့်ပြီး ကျိုပေးထားပါ။ဆူပွက်လာလျှင် အသားနွှင်ထားသော ဒူးရင်းသီးကိုထည့်ပြီး မီးအရှိန်လျှော့ကာ ပြန်ကျိုပေးထားပါ။
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကျိုပြီးရင် ဒူးရင်းသီးအရသာနဲ့ နို့အရသာ စိတ်ကြိုက်အရသာရပြီဆိုရင် အဆင်ပြေရင်ရပါပြီ။ပြီးနောက်ကျိုထားပြီးတဲ့ဒူးရင်းသီးနဲ့နို့ကိုဖန်ခွက်တ စ်ခုထဲသို့ ကြိုက်သလောက်ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် စောစောက ခပ်ယူထားတဲ့ မလိုင်ဖတ်များကို အပေါ်မှထည့်ပြီး နို့စိမ်းအနည်းငယ်ထည့် ရေခဲတုံးလေးထည့်ပြီးရင်တော့ အရသာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ချို၊ ဆိမ့်၊ မွှေး၊ အေးသော ဒူးရင်းမလိုင်လေးကို အသင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥလွှာအတွက် ကြက်ဥ၄လုံး၊ ဂျုံ၅ဇွန်း၊ ဆားနဲ့ရေကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်စာကိုနှံ့အောင်မွှေပေးပြီးအရည်ကိုဇကာနဲ့စစ်ပါ.
Non Stick Pan ကိုဆီလေးနဲနဲသုပ်ပြီးမီးအပူချိန်အနဲဆုံးမှာကြက်ဥအရည်ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်းစာထည့်ပြီးဒယ်အိုးနှံ့အောင်ခပ်မြန်မြန်လေးဒယ်အိုးကိုမပြီးဝိုင်းပေးပါ.
၁▪ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာပြီးသား ၁ ပိဿာ
၂▪သကြား ၂၅ ကျပ်သား
၃▪ကွကျဥ ၅ လုံး
၄▪ထောပါတ် ၅ ကျပ်သား(ကိုယ်က boss သုံးတယ် မထည့်လဲရတယ်)
၅▪ဆီ ၁၀ သား
၆▪နို့ဆီ ၁/၃ ဗူး
၇▪ဆား ၂ ဇွန်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
၈▪ဂျုံ ၂၀ သားထည့်
ဖုတ်မယ့်ဗန်းထဲ ဆီသုတ်ပြီး နယ်ထားတဲ့
အပေါ်အောက် မီး ၁၆၀°C ဖြင့် မိနစ် ၇၀ ဖုတ်ပါ။
#Hnin Nu Wai Credit
ဒီတခါတော့ စားလို့လဲကောင်း အာဟာရလဲရှိ ကလေးရော လူကြီးတွေအတွက်ပါ အားရှိစေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတဲ့ကန်စွန်းဥပူတင်းလေးပါ။ ကန်စွန်းဥပူတင်းကို oven မုန့်ဖုတ်စက်နဲ့ဖုတ်လို့လဲရသလို ပေါင်းအိုးထဲထည့်ပေါင်းလို့လဲရပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြုလုပ်ရလွယ်ပြီး စားလို့လဲကောင်းတဲ့ ကန်စွန်းဥပူတင်းကိုလုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ ကန်စွန်းဥ - ၁၅ ကျပ်သား
၃။ နွားနို့- ၅၀၀ ml
၄။ သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်း (သို့) ၅ ဇွန်း
၅။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
၁။ မုန့်ဖုတ်စက် oven ကို 350'F (175'C) မှာ ဘာမှမထည့်ပဲ အပူပေးထားပါ။ (ပေါင်းအိုးဖြင့်ပေါင်းမည်ဆိုလျှင် ဒီအဆင့်ကိုပြုလုပ်စရာမလိုပါ။)
၂။ ကန်စွန်းဥကို နူးအိနေအောင်ပြုတ်ပါ။ ပြုတ်ထားသော ကန်စွန်းဥကို အခွံနွှာ၊ ဇကာတိုက်ပြီး ကန်စွန်းဥအနှစ်ရအောင်လုပ်ပါ။ မုန့်ဖုတ်မည့်ဘန်း (သို့) ခွက်ကို ထောပတ်သုတ်ထားပါ။
၃။ ဇလုံတခုထဲကို ကြက်ဥများထည့်ပြီးခလောက်ပါ။ ထို့နောက် နွားနို့၊ သကြား၊ ဆား နှင့် ကန်စွန်းဥအနှစ်များထည့်ရ်ျ အားလုံး တသားထဲဖြစ်သွားအောင် နာနာလေးခလောက်ပါ။ ထို့နောက် ထောပတ်သုတ်ထားသော ဘန်း (သို့)ခွက်ထဲကိုထည့်ပါ။
၄။ ၃၅၀'F (၁၇၅'C) မှာအပူပေးထားသော oven မုန့်ဖုတ်စက်ထဲမှာ ထည့်ရ်ျ ၁ နာရီဖုတ်ပါ။ (ပေါင်းအိုးဖြင့် ပေါင်းမည်ဆိုလျှင် မိနစ် ၂၀ -၃၀ ခန့်ပေါင်းပါ။)
၅။ ကန်စွန်းဥ အနံ့မွှေးမွှေးနှင့် အလွန်အရသာရှိသော ကန်စွန်းဥပူတင်းကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။
#Ei san homemade
အခုပြုလုပ်ထားတဲ့ ရွှေကြည်ပူတင်းလေးကတော့ လူတိုင်းကြိုက်မှာသေချာပါတယ်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (၈ x၈ လက်မ တဘန်းစာ)
၁။ နွားနို့- ၇၅၀ ml
၂။ သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၁၂ ဇွန်း
၃။ ရွှေကြည် - ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
၄။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
၅။ ကြက်ဥ - ၂ လုံး
၆။ ထောပတ် - ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
(ထမင်းစားဇွန်း = 1 tablespoon = 15 ml ၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း = 1 teaspoon =5ml )
၁။ ကြက်ဥကို ခလောက်ထားပါ။
၂။ အိုးတခုထဲကို နွားနို့၊ သကြား၊ ဆားတို့ကိုထည့်ရ်ျ အပူပေးပါ။ အနည်းငယ်ပူလာလျှင် ထောပတ်ကိုထည့်ပါ။ (ထောပတ်အခဲကိုထည့်လျှင် အရည်ပျော်သွားသည်အထိစောင့်ပါ။)
၃။ ထောပတ်ထည့်ပြီးလျှင် ရွှေကြည်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပါ။အဆက်မပျက်မွှေပါ။ comment ပုံမှာပြထားသလိုမျိုး ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်သွားလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချပါ။
၄။ မီးဖိုပေါ်မှချပြီး ၅ မိနစ်လောက်နေလျှင် ခလောက်ထားသော ကြက်ဥကို အိုးထဲကိုထည့်ရ်ျ သမသွားအောင်မွှေပါ။
၅။ ထို့နောက်ဆီသုတ်ထားသော ဘန်းထဲကိုထည့်ပါ။
၆။ အပူချိန် ၃၅၀'F (၁၈၀'C) မှာအပူပေးထားသော မုန့်ဖုတ်စက်ထဲကို မိနစ် ၅၀ ထည့်ဖုတ်ပါ။ မိနစ် ၅၀ ပြည့်လျှင် အပူချိန်ကို ၄၅၀ 'F (230'C) မှာထားပြီး ၁၀ မိနစ်ဖုတ်ပါ။ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင် ညိုလာပါလိမ့်မည်။
၇။ အအေးခံရ်ျ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရွယ်အစားလှီးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။
" ကြက်ဥ ငှက်ပျောပေါင်း "
ငှက်ပျောသီး - ၂ လုံး (ချေထားပါ)
သကြား - ၁ ဇွန်းခွဲ (စားပွဲတင်ဇွန်း)
ဂျုံမုန့် - ၁ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
ဆော်ဒါမုန့် - အနည်းငယ်
ကြက်ဥ ၊ ငှက်ပျောသီး တို့ကို အရင်ဆုံး ရောချေထားပါ ။
ပြီးလျှင် သကြား ၊ ဆား ၊ ဂျုံမှုန့် ၊ ဆော်ဒါမှုန့် အားလုံးနှင့် သမအောင် ခေါက်ပါ ။
ပြီးလျှင် ဆီသုတ်ထားတဲ့ အိုးထဲ ပြောင်းထည့်ကာ အိုးအဖုံး ပိတ်ပြီး ကျက်လာတဲ့အထိ ပေါင်းထားပါ ။
ကျက်မကျက် သိချင်လျှင် ဇွန်းနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ ။ အထဲမှာ အရည်တွေ မရှိတော့ဘဲ တင်းတင်းလေး ဖြစ်လာရင် ကျက်ပါပြီ ။
ပြီးလျှင် ဓားလေးနဲ့ အရာပေးပြီး ပန်းကန် ပေါ်မှောက်ချ ခွဲပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဂျုံသို့ဆန်အမှုန့် 100 gramထည့်ပေးပါ
မုန့်အနှစ် ကောက်ညှင်းအမှုန့် ၅ကျပ်သားကို ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်းထည့်ပါ
မီးအပူကိုတအားကြီးမပြင်းပါနဲ့ ကောက်ညှင်းအမှုန့်ကိုဖြူးတဲ့အခါ အရမ်းကြီးပါးသွားရင်ပေါက်တတ်ပါတယ်
လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး စားလို့လည်းကောင်း လုပ်ရတာလည်း အလွန်လွယ်ကူတဲ့ သာကူဆနွင်းမကင်းလေးပါ ။ အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်စားလို့ရပါတယ် ။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာပြီး လုပ်ရတာလည်းမြန်ပါတယ် ။စိတ်ဝင်စားရင်လုပ်ကြည့်ပါ ။သဘောကျရင် မိတ်ဆွေတွေကို လည်းမျှဝေလိုက်ပါနော် ။
သာကူစေ့...၂၅ ကျပ်သား(ရေဆေးပြီး ဇကာနဲ့စစ်ထားပါ)
coconut cream..၁ ဗူး(သို့)
အုန်းသီး ..၁လုံး (ခြစ်ပြီး အရည်ညှစ်ထားပါ)
၁။ သာကူ သကြား ဆား နွားနို့ အုန်းနို့အားလုံးရောပြီး သမအောင်နယ်ပါ ။ မုန့်ဖုတ်မည့်ဗန်းထဲသို့ထောပတ်(သို့)ဆီထည့်ပြီး နယ်ထားတဲ့သာကူကို လောင်းထည့်ပါ ။
၂။ ညီအောင်ညှိပြီး အပေါ်ကဘိန်းစေ့ဖြူးပြီး အပေါ်မီး အောက်မီးနဲ့ ဖုတ်ပါ။ မုန့်ဖုတ်တဲ့ oven ရှိရင်တော့ oven ထဲထည့်ဖုတ်ပါ။
အိမ်မှာတော့ (oven မရှိ အပေါ်မီးအောက်မီး မရှိ)ဂက်စ်မီးဖို နဲ့ ချက်တဲ့ အတွက် ဆီမကပ်တဲ့ ဒယ်ပြန့်ထဲ ထည့်ပြီး မီးနဲနဲ နဲ့ အပေါ်ယံ ကျက်ခါနီးထိ မိနစ် ၃၀ ခန့် တင်ပြီး ဘန်းထဲသို့ဆီထည့်ပြီး မှောက်ချလိုက်ပါ ။ မီးဖိုပေါ်နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်ခန့်တင်ပြီး ရင် ရပါပြီ ။
အအေးခံပြီးလိုသလို လှီးဖြတ်စားနိုင်ပါတယ် ။
Credit to LaeCookingDiary
By Wyk (The Myanmar Restaurant Guide)